I-China EAS SYSTEM AM System Acrylic Umgangatho ophezulu we-eas 58KHz Isinxibo seVenkile yoKhuseleko Isango-PG300 abavelisi kunye nabathengisi | Etagtron
Ivenkile yokunxiba eyothusayo iNkqubo ye-EAS
•Ukhuseleko-i-acrylic kunye nesiseko sesinyithi senza i-eriyali ngokunganyangekiyo, inika "imvakalelo engabonakaliyo", intle kwaye ijongeke kakhulu kwifashoni nakweyiphi na ivenkile yangaphakathi okanye yanamhlanje.
•Alarm ekude ukhetho ulumkisa abasebenzi ngeziganeko ze-alamu naphina Ivenkile
•Unxibelelwano lwezibuko lwenkonzo luvumela ulawulo olupheleleyo lwesoftware nakweyiphi na i-eriyali
•Umlawuli ngamnye unakho ukudibanisa ukuya kwi-eriyali ezi-4.
Inkqubo ye-EA AM-PG300
Iinkcukacha eziphambili zenzuzo yokhuseleko lwevenkile:
1.Adopts Mitsubishi ekrwada izinto, ukugcina akukho-umbala fade, akukho deformation ubuncinane
2. 10years kwindawo yangaphakathi.
3. Isiseko seplate senziwe nge-alloy aluminium ephezulu ene-oxidation yomphezulu, yomelele kwaye intle.
4. Isiseko sekhava senziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu engama-304, kodwa hayi ngentsimbi engama-204 ekulula ukuba irusi.
Elungiselelweyo logo kwiqweqwe elisezantsi
♦Ukugquma i-2.0m ngeelebheli ze-DR zii-eriyali ezimbini.Umlawuli omnye unokuqhuba ukuya kwi-eriyali ezi-4. Uluhlu olubanzi kakhulu lokufumanisa kwimowudi ye-Quad (ene-eriyali ezi-4) inokufikelela ngaphezulu kwe-8M kunye neelebheli ze-DR.
♦Iyakwandisa inkqubo yokuchasana nokuphazamiseka, kwaye i-eriyali inokuyilwa ngokukhululekileyo.Iyunithi enye, iiyunithi ezimbini, okanye nangaphezulu inokusetyenziswa kwivenkile, kwaye umgama wokubona unyuka njengoko inani lonyuka lisebenzisa.
Egqithileyo I-EAS iimpahla ezingabizi kakhulu ngokuchasene nokubiwa kwedijithali yephepha lentengo ye-AM DR ilebheli yethegi ethambileyo
Okulandelayo: Ivenkile yokuThengisa ye-EAS 58khz AM Ivenkile yokunxiba iAlarm Anti-theft Aystem Gate-PT309
Inkqubo ye-EAS ye-Antenna yeVenkile yoKhuseleko ...